Ihe omuma ohuru ohuru | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ihe omuma ohuru amaghi
Fausto Ramirez | | Ihe ọkụkụ, Biogas
N'azụ okwu a methanization odịbe a eke usoro nke mbibi nke organic n'agbanyeghị na e nweghị oxygen. Nke a na - emepụta gas na ya mere ike. Ọtụtụ ụlọ ọrụ taa na-eji usoro a iji kpochapụ ihe mkpofu ha, na-eji ihe ọhụrụ, nke a na-amaghị ama nke ume na-atọ ụtọ.
1 Rụrụ melon
2 Carrot rere ere
3 Ike si na chiiz
4 Anụmanụ mmadụ
Oge ọ bụla, ụlọ ọrụ na-amị mkpụrụ na France na-achọpụta tọn 2000 nke anyụ na ha enweghị ike ire. Agbanyeghị, njikwa mkpofu a nwere ego ruru € 150.000 kwa afọ maka njem na ọgwụgwọ. Na 2011, ụlọ ọrụ ahụ nwetara ụlọ ọrụ methanization nke ụlọ ọrụ Belgium mepụtara, GreenWatt. Kpụrụ ahụ dị mfe. Mkpụrụ osisi mebiri emebi ma ọ bụ nke rere ure ka a na-etinye ha n’ebe a na-eme ha ka nje ndị na-enye ha ihe na-emebi emebi. A na-erere ume ike ewepụtara, ebe a na-eji okpomọkụ n'ime ụlọ ọrụ n'onwe ya.
Carrot rere ere
Otu ụkpụrụ itịbe ke carrots. Otu French, otu n'ime ndị isi Europe na-azụlite karọt, nke eweputara na 2014 ihe banyere biomethanization, nke ulo oru meputara GreenWatt. Otu a na - eweputa ume maka ulo 420.
Ike si na chiiz
Chiiz nwekwara ihe a na-ejighị n'aka. Njikọ nke ndị na-emepụta ihe na mpaghara Savoy, France, hibere Ọktọba gara aga maka otu mgbanwe nke whey, mmiri mmiri na-acha odo odo nke mepụtara site na imepụta chiiz. Na mgbakwunye na mmepụta nke bọta, mmewere a bụkwa isi iyi nke ike site na usoro nke metiwe. Thislọ ọrụ a kwesịrị ikwe ka mmepụta nke ihe ruru nde kW nde atọ kwa afọ, ya bụ, nha nha ọkụ eletrik nke ndị bi na 1500.
Otu ụgbọ ala na-aga n'okporo ámá nke Bristol, Na England. Ebumnuche nke ụgbọ ala ahụ bụ na ọ na-ekesa ekele maka nsị mmadụ. Ọ bụ mmanụ ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ ebe ọ bụ na ọ na-ewe 80% nke carbon dioxide na n’etiti 20 na 30% nke dioxide carbon erughị mmanụ dizel. Biobus a nwere ike ịga njem ruo kilomita 300 site na nsị nke ahịhịa ndụ kwa afọ nke mmadụ 5. N'ịbụ onye nwere ihe ịga nke ọma nke ọrụ pilot ya, ụlọ ọrụ ahụ GENENỌ amalitela ịrịọ arịrịọ maka gọọmentị iji mepụta netwọkụ ọkụ ya dị ọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ihe ọkụkụ » Biogas » Ihe omuma ohuru amaghi
Enwere ọtụtụ uru nke biogas. Enwere ike iji ya dị ka ọkọnọ ike n'oge awa na - apụ, n'ihi na ọ chọghị anwụ ma ọ bụ ikuku iji mepụta ya na ọ chọghị batrị iji gbakọta ya.
Ngwa nke na-amata osisi a la "Shazam", Plantnet
Anụmanụ anụmanụ na gburugburu ebe obibi, njikọta dị egwu